By Htet Wai Aung - September 12, 2016
A. ဒီမှာ အပြည့်အစုံပြောပေးထားတယ်။
A. ဒီလိုလုပ်။ iOS9 ထိတော့ ရသေးတယ်။ နက်ဖြန် 10 ထွက်ပြီ။ အဆင်ပြေမပြေပြန်ပြောပြ :3
A. စုပေးထားတယ် ဖရင့် fb page တွေကော ယူနီသုံးတဲ့ website တွေကာ :3
A. ဒါလေးတွေ သွင်းထား
Chrome : https://chrome.google.com/webstore/detail/mua-web-unicode-converter/jnmdbgnckbbmblkbammnfagdmikchhnp?hl=en
Firefox : https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/mua-web-unicode-converter/
Q. Windows မှာ သဝေထိုးရှေ့ကရိုက်လို့ရတဲ့ ကီးဘုတ်မရှိဘူးလာဟ။ သဝေထိုးရှေ့ကမရိုက်တတ်ဘူး။ :\_
A. ကိုဇေယျာတို့ လုပ်ပေးထားတဲ့ အသောက ရှိတယ်။ :D